UGoogle Chrome kwiinyanga ezingama-30 kamva-iGeofumadas
Meyi, 2011 Internet kunye neBlogs
Kwiminyaka emibini enesiqingatha eyadlulayo uGoogle wasungula iChannel, kancinci kancinci bendijonga indlela abatyeleli kule ndawo abazishiya ngayo ezinye iibrawuza kwaye batshintshele kule, ngelixa abasebenzisi beInternet Explorer bekhuphela kunye nokuhlasela konxibelelwano lweselfowuni. NgeChannel sifunde ukwenza izinto ngokwahlukileyo, ubuncinci kwinqanaba ledesktop; Sibonile notshintsho olukhulu ngesafa, ngakumbi ukusukela Iinyanga ze-30 ezidlulileyo ukusuka kuma-smartphones kwakungekho imfashini njenganamhlanje, akukho ukuxhomekeka ngokugqithisileyo kumanethiwekhi asekuhlaleni.
Ndisebenzisa iChrom ukususela khululwa, ekuqaleni ukuvavanya ukuba iyasebenza kodwa andikaze ndibuyele kukhuphela i-beta yeFirefox kunye nezandiso zayo ezingapheliyo, nangona kungaqhelekanga ukuba isantya sihlala siphezulu. NdineSafari ecaleni kwam, ukuba i-intranet iyacotha, ujongano lwayo luyafana kodwa ungawuchaza umahluko xa ndinamathisela iifayile kwi-Gmail kwaye ndicinga ukuba abasebenzisi beMac baziva ngendlela efanayo kuba zombini izikhangeli zilungiselelwe iimveliso zazo.
Ngenjongo yokuthelekisa kwimeko yokuthetha isiSpanish, siza kujonga ngokukhawuleza kwiinkcukacha ezivela kwisampuli esondeleyo yeendwendwe ze-30,000 phakathi koJanuwari no-Matshi wonyaka we-2008, iinyanga ezintathu ngaphambi kokuba i-Chrome ikhishwe; kunye nomlinganiselo ofanayo phakathi koFebruwari noKwindla we2011.
Ngaphambi kokuba i-Chrome ifike
Phakathi kweInternet Explorer kunye neFirefox 97% yabatyeleli bewebhu babelwana ngayo. I-Opera imile kunye ne-Safari kuphela kwiqela elincinci labasebenzisi beMac.
Kwenzeka njani ngoku
Jonga indlela i-23% esele ifikelelwe ngayo yiChannel ngokususa abasebenzisi abangama-8,392 kwi-Internet Explorer; Ingabonakala ilula, kodwa ibonisa ilahleko ye-39% kwiminyaka emibini enesiqingatha kuphela. Impumelelo yeFirefox ayikho ekukhuleni kwayo, kodwa kukuzinza kwayo, kuba ngokuqinisekileyo ilahlekile nabasebenzisi abayishiye iChannel; Ngaphandle koku, ifumene abasebenzisi abangama-945 ekwakufuneka baphume kwi-Intanethi Explorer kwaye ibonisa ukukhula kwe-12%.
Kucacile ukuba eyona ilahlekileyo yi-Internet Explorer, ethi iwele phantse kwisiqingatha, engafanelanga ukusetyenziswa gwenxa kweenkqubo zokusebenza yeWindows. Ngumkhwa wokuziphatha kokukhangela, yiyo loo nto iSafari iphinda ibuye i-2% yento, ngenxa yemfuno esele ikho ngoku yokukhangela okushukumayo apho ukubrawuza kulawula khona ngenxa yempumelelo yeemveliso ze-Ipad kunye ne-Iphone.
Bona ukuba i-Opera ihlala iphantse yafana, ngokungafaniyo ngoku isikhangeli sayo esincinci simelwe yimfuno yabasebenzisi beselfowuni, kubandakanya nabo bakhuthaza iFlash. Eminye imigca ayisiyi-1%.
Ngokuphathelele iinkqubo zokusebenza, iWindows ihlile ukusuka kwi-97.55% ukuya ku-95.03%, kule nto ungabona ukukhula kwe-Mac okwangoku kudlula i-Linux kwaye ke uluhlu lonke lwezikhangeli ze-mobile.
Ngokuqinisekileyo, i-Chrome ize itshintshe indlela ezisebenza ngayo iibrawuza, kuba isiphelo sikaGoogle sidlulela ngaphaya koko. Injongo yokuyithatha ibe yinkqubo yokusebenza kwi-intanethi yonke imihla iyenzeka ngokufika kwezixhobo zefowuni eziqinisekisa imeko.
Ndiyishiye igrafu Woopra maphepha abonwa kwiiGofumadas kwiiveki ezintathu zokugqibela ukuze benze izigqibo zabo.
IGoogle Chrome ayinazo iinguqulelo, iyazihlaziya, wonke umzuzu. Yiyo loo nto ingamanqaku ali-10 ukusuka kuhlobo olukhethwe ngabanyanisekileyo be-Internet Explorer apho sibona khona abasebenzisi abasasazekileyo besebenzisa i-Explorer 5. Iyadlula kubasebenzisi be-Explorer 3, eshiyeyona isetyenziswa kakhulu nangona kukho umqolomba usebenzisa iFirefox 1.
Oku kwenza umfanekiso ukhawuleze kakhulu: I-Chrome enye, kwiluhlu olude lwe-19 flavour, apho i-5 ivela kwi-Firefox, i-5 esuka kwi-Explorer, i-5 esuka kwi-Safari.
UGoogle usebenzise isicwangciso-qhinga sokuhlaziya ngokuzenzekelayo kuhlobo olunye kakuhle, ukuze abasebenzisi bangazibuzi ukuba bakhuphele uhlobo olutsha okanye batshintshele kwiFirefox. Nangona ubukhulu beli qonga lingekabonwa, liyabonakala emva kokuba uGoogle eqale ukukhuthaza usetyenziso, umphathi walo womsebenzi, utshintsho lwazo zonke iiGoogle Apps ukuya kwiqonga elitsha, Isitoreji sewebhu se-Chrome kunye nomxholo walo weselula okhula apho.
Kuyahlekisa ukuba yonke into ephunyezwe kwiChannel ifike apho kwaye asikhe siqaphele. Siyayiqaphela xa sibona ukhetho olutsha, kunye nendlela etshintshe ngayo indlela yokukhangela, siyayiqonda xa kufuneka sisebenzise isikhangeli sangaphambili kumatshini welinye ilizwe.
Nantsi unokukhuphela i-Google Chrome.
Post edlulileyo«Ngaphambilini FastCAD, i-AutoCAD Shadow
Post Next UTM idibanisa kwiimephu zeGoogleOkulandelayo »